China LED Shower Head Abavelisi kunye nababoneleli-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Intloko yeshawari > Intloko yeshawari ye-LED
Intloko yeshawa yesandla yoMkhaya Tshintshela
Ishawa ephathwa ngesandla yeSebe Lesihlanu yasekhaya
Electroplating Five-Function Hand Shower
ABS Plastic-Ezintlanu-Function Hand Shower
Intloko yeshawari ye-LED Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu iilayini zococeko ziquka oku kulandelayo: Intloko yeshawari, intloko yeshawari ye-LED, Ishawa yesandla, iiseti zesilayidi zikaloliwe, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, iShower Bidet, iShower & negumbi lokuhlambela izincedisi kunye norhwebo nezinye iimveliso zempahla yococeko kwi Made in China Website.
Intloko yeshawari ye-LED iyinoveli kuyilo, ihambelana nokusingqongileyo kunye nokugcina amandla, kunye nokuhamba kwamanzi okukhanyayo, akukho bhetri, kunye nokuguqulwa kombala ojikelezayo okanye obushushu, okwenza ukuhlamba kube nomdla ngakumbi.
Sinegunya elinamandla lokuphuhlisa uluhlu olubanzi lweemveliso ezintsha ngokobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha kubathengi bethu abadala ukhetho olwahlukileyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Intloko yeshawa ye-LED’s umgangatho ophezulu weemveliso uqinisekiswa ngobuchwepheshe obuphambili, izixhobo zanamhlanje, kunye nolawulo lomgangatho kwinqanaba ngalinye lemveliso. Ngombono wethu wolawulo kunye nokukhula okuqhubekayo, iimveliso zithengiswa kakuhle kwimarike yehlabathi, eye yazuza udumo oluhle kakhulu. Ishishini lethu ligxile kwi-R&D, iOEM, iODM.
Hamba kunye neHuanyu, ukhetho lwakho oluhle.
Le Ulawulo lobushushu Intloko yeshawari ye-LED Akukho bhetri, ukuveliswa kwamandla okuhamba kwamanzi, okufanelekileyo kuxinzelelo lwamanzi oluqhelekileyo, amanzi athambileyo, akukho mvakalelo ephazamisayo, ubuso obukhulu be-120mm benza ishawari ikhululeke ngakumbi.
Funda ngokugqithisileyoThumela u kuphanda
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Intloko yeshawari ye-LED zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Intloko yeshawari ye-LED uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.
Idilesi:No.288 Sitang Heng Road, Changhe Town, Cixi city, Ningbo City, Province Zhejiang, China.
Ilungelo lokushicilela © 2021 Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd. Onke Amalungelo Agciniwe.